दशैंमा नोट छाप्दा राज्य भयो घाटा कारण यस्तो ! - Samachar PatiSamachar Pati
दशैंमा नोट छाप्दा राज्य भयो घाटा कारण यस्तो !
५ कार्तिक l
राष्ट्र बैंकले यति परिमाणमा नयाँ नोट छाप्दा खर्च पनि ठूलै भएको छ । यति नोट छाप्दा करिब ७९ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीको रकम खर्च भएको छ । यस अवधिमा ७८ करोड ९० लाख २८ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ नयाँ नोट छाप्दा मात्रै खर्च भएको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । एकातर्फ छपाईमै यतिधेरै खर्च भएको छ भने दशैंमा वितरण गरिएका धेरै नोटहरु विग्रने तथा नष्ट हुने कारणले पनि राज्यकोष ठूलो रकम नयाँ नोटमा खर्च हुने गरेको छ ।
दशैंमा वितरण गरिएका धेरै नोटहरु विग्रने तथा नष्ट हुने कारणले पनि राज्यकोष ठूलो रकम नयाँ नोटमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी दशैंमा वितरण गरिएका नयाँ नोटमा अबीर र टीकाको माध्यमबाट होस् या जुवातास खेल्दा हुने क्षतिका कारण मुलुकको ढुकुटीबाट नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्यलाई यसरी वर्षेनी व्यवभार बढ्दै जाने हुँदा दशैंका बेला नयाँ नोट वितरण बन्द गर्ने हो कि भन्ने बहस राष्ट्र बैंकमै शुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दशैंकै बेला नयाँ नोट छाप्दा खर्च सँगै व्यवस्थापनको समेत चुनौती सामाना गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नोटका विषयमा नयाँ निर्णय गर्ने गरी छलफल शुरु भएको छ ।
नयाँ नोट दशैंका बेला वितरण गर्दा खर्चसँगै व्यवस्थापनमा समेत ठूलो चुनौती देखिएको छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि भन्दै ७ दिनसम्म नयाँ नोट वितरण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने भनेको ७ दिनै बैंकिङ कार्यालय थापाथलीमा सर्वसाधारणको घुईचो लागेको थियो । सर्वसाधारणहरु बिहान ३ बजेदेखि समेत नयाँ नोट सटहीका लागि थापाथलीमा लाइन लाग्न पुगेका थिए । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा समेत सटही सुविधा हसने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
आयल निगमले फेरि गर्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि
जय मनकामना सहकारीको सत्रौ साधारणसभा सम्पन्न